Jeneraal Xuud oo shaaciyey inuu qabsaday magaalada Beledweyne kadib dagaal | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Jeneraal Xuud oo shaaciyey inuu qabsaday magaalada Beledweyne kadib dagaal
Beledweyne (Dalkaan.com) – Janaraal Abuukar Xaaji Warsame (Xuud), oo kasoo horjeeda maamulka HirShabelle, ayaa faah-faahin ka bixiyey dagaal ay ciidankiisa shalay la galeen maamulka gobolka Hiiraan, kaasi oo uu guulo ka sheegtay.
Janaraal Xuud oo wareysi gaar ah siiyay BBC-da ayaa beeniyey inuu billaabay dagaalka, wuxuuna sheegay in dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Qowlad oo qiyaastii 12Km waqooyi uga beegan xaruunta gobolka Hiiraan ee Beledweyne uu ahaa mid lagu soo qaaday fariisamahooda.
Waxa uu sheegay in hadda uu si buuxda gacanta ugu hayo maamulka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, islamarkaana ay ciidankiisa joogaan inta badan xaafadaha magaalada.
Waxaa ilaa xalay magaalada ka socday dedaallo la doonayay in si nabad ah ay magaalada ku yimaadaan Cali Jeyte iyo ciidamadii la socday ee shalay dagaalka ku galay deegaanka Qowlad iyo in janaraal Xuud uu ka baxo magaalada, islamarkaana xabbad dambe aysan ka dhicin.
Jeneraal Xuud ayaa sheegay in ujeeddadiisu tahay dhismaha maamul goboleed lagu magacaabo Hiraan oo aysan dooneyn in ay wax la qeybsadaan maamulka haatan jira ee HirShabeelle ee uu Cali Guudlaawe madaxweynaha ka yahay.
Xuud ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyay in ay diiday in ay wadahadal iyo heshiis la gasho ciidamadiisa, sidaa awgeedna ay xoog iyo cabburin ku dhistay maamulka haatan ka jira HirShabelle.
Janaraal Xuud ayaa sheegay in madaxtinnimada gobolkaasi ay qaateen dad uu sheegay in aysan u dhalan gobolkaasi oo ujeedadoodu ay tahay buu yiri in ay madaxtinnimo ku helaan sidaasi.
Guddoomiyaha gobolka Hiraan, Cali Jeyte, wuu sheegay in dagaalkii shalay dhacay ay iyaga guushu ku raacday isla markaana ciidamadii ka soo horjeeday ay u cararreen dhanka dhul sida uu sheegay ay joogaan Al-Shabaab.
Wuxuu intaasi ku daray in Beledweyne ay ku soo rogeen bandow isla markaana hawlgallada socda ay sii wadi doonaan balse ilo lagu kalsoon yahay ayaa BBC-da u sheegay in bandowgaasi uusan wali dhaqangelin oo xalay ilaa xilli dambe ay magaaladu ka socdeen muddaharaadyo looga soo horjeedo dagaalkaasi iyo maamulka HirShabelle.
Kylian Mbappe oo Gaaray go’aankii muddada laga sugayay ee mustaqbalkiisa...
Xiddiga reer France ee Kylian Mbappe ayaa gaadhay go’aankii muddada laga sugayay ee mustaqbalkiisa iyo halka uu ka ciyaari doono xilli ciyaareedka dambe. Mbappe...
”MUCJISO RABAANI AH OO KA DHACDAY MAGAALADA LONDON”
Wararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Lukaku, Jorginho, Emerson, Alonso, Azpilicueta, Salah
Horudhac: Everton Vs Manchester United ee Horyaalka Premier League-ga, Wararka Labada...